Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Barlamaanka Somalia oo Soo Gaaray Puntland – Radio Daljir
Seteembar 9, 2015 7:04 b 0
Arbaco, September 09, 2015 (Daljir) —Gudoomiye Kuxigeenka labaad ee barlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad iyo wafti uu hogaaminayo ayaa maanta siweyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Galkacyo.
Mahad Cabdalle Cawad gudoomiye kuxigeenka labaad ee barlamaanka ayaa waxaa garoonka kusoo dhoweeyey gudoomiyaha barlamaanka dowladda Puntland Mudane Siciid Xasan Shire iyo xubno katirsan golayaasha dowladda Puntland.
Gudoomiyaha barlamaanka dowladda Puntland Siciid Xasan Shire ayaa waftigaan kusoo dhoweeyey Puntland, wuxuuna sheegay in guud ahaan shacabka iyo dowladda Puntland ay ku faraxsan yihiin inay soo dhoweeyaan gudoomiye kuxigeenka labaad.
Waftiga uu hogaaminayo gudoomiye kuxigeenka labaad ee barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa loo gudbiyey xarunta uu magaalada Galkacyo ka degan yahay madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Arbaco_09